किकी च्यालेन्ज जाेखिमपूर्ण भाइरल डान्स - Naya Patrika
किकी च्यालेन्ज जाेखिमपूर्ण भाइरल डान्स
काठमाडाैं | साउन २४, २०७५
विश्वभरि अहिले एउटा डान्स भाइरल भइरहेको छ । त्यो ‘किकी च्यालेन्ज’ डान्स हो । केही न केही भाइरल भइरहने इन्टरनेटको दुनियाँमा एउटा फरक खालको डान्स भाइरल हुनु कुनै ठूलो विषय त होइन । तर, यो भाइरल डान्सको विषय भने फरक र डरलाग्दो भएकाले सचेतनाका लागि पनि जानकारी राख्नु जरुरी छ ।
‘किकी च्यालेन्ज’ डान्स उट्पट्याङ लाग्दो हुन्छ । यो डान्स गर्दा गुडिरहेको गाडीबाट म्युजिकको तालमा झरेर गीतकै तालमा नाच्दै–नाच्दै फेरि गडिरहेको गाडीमा चढ्नुपर्छ । सो भिडियो गाडीभित्र बसिरहेको अर्को साथीले खिचिदिन्छ । गीतमा नाच्न गरिएको त्यही चुनौतीपूर्ण क्षणलाई कैद गरेर भिडियोलाई इन्स्टाग्राम, फेसबुक र युट्युबमा पोस्ट गरिन्छ ।
क्यानेडियन र्‍याप गायक ड्राकको नयाँ एल्बम ‘स्क्रोपिओन’को गीत ‘इन माई फिलिङ्स’को म्युजिकमा किकी च्यालेन्ज डान्स गर्ने गरिएको छ । अलिहेसम्म विश्वका दर्जनभन्दा बढी चर्चित सेलेब्रिटी समेतले यस उट्पट्याङ डान्समा भाग लिइसकेका छन् । ती सेलेब्रिटी च्यालेन्जमा भाग लिएकै कारण विवादमा समेत परेका छन् । चर्चित सेलेब्रिटी नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि सर्वसाधारणले पनि त्यसको सिको गरेका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै कतिपय मुलुकले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । के हो त ‘किकी च्यालेन्ज’ डान्स ? जसले इन्टरनेट दुनियाँमा यति धेरै खैलाबैला मच्चाउन सफल भएको छ ।
किकी च्यालेन्ज डान्सको रहस्य
किकी च्यालेन्ज क्यानेडियन गीतकार तथा र्‍यापर औब्रे ड्राक ग्राहमको नयाँ एल्बम ‘स्क्रोपिओन’को गीत ‘इन माई फिलिङ्स’मा गरिने रोड डान्स हो । सबैभन्दा पहिले चर्चित कमेडी टेलिभिजन सो ‘द सिगी सो’का अभिनेता तथा प्रोड्युसर सिगीले यसलाई निकै रोमाञ्चक ढंगले प्रस्तुत गरे । त्यसपछि विश्वका चर्चित सुपरस्टार विल स्मिथ, सायरा, लिली मामादेखि बास्केटबल खेलाडी जेम्स हार्डेनसम्मले यस गीतमा कभर डान्स गरेर त्यसको भिडियो इन्स्टाग्राम र युट्युबमा पोस्ट गरेका छन् ।
सुपरस्टारले नै यसमा सहभागिता जनाउन थालेपछि विश्वभरिका लाखौँ फ्यानले त्यसको सिको गर्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सेयर गरिरहेका छन् । उनीहरूले कार, रिक्सा, ठेला आदि साधनबाट हामफालेर डान्स गरेका भिडियोहरू पछिल्लो समय इन्टरनेटमा भाइरल भएका छन् ।
अमेरिका, युरोप, इजिप्ट, जोर्डन, युएई र भारतमा समेत यस भिडियोको कभर गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतमा केही फिल्म र टेलिसिरियलका कलाकारले समेत किकी च्यालेन्ज डान्स गरेपछि दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पनि यो क्रम बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि केही युवाले यसको सिको गरेर बाइक र गाडीमा यसको अभ्यास गरेको भिडियो युट्युबमा राखिएको छ र यो क्रम बढ्दो छ । माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा करिब २ करोडभन्दा धेरैले ‘किकी च्यालेन्ज’ र ‘डु द सिगी’ ह्यासट्याग दिएर ट्रेन्डिङ च्यालेन्जमा सहभागिता जनाउँदै भाग लिएका छन् ।
को हुन् किकी ?
गीतमा सम्बोधन गरिएकी पात्र ‘किकी’ को हुन् त ? यस विषयमा यतिवेला फरक–फरक मत आइरहेका छन् । गायक ड्राकले पनि अहिलेसम्म किकी को हुन् भन्ने बारेमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । गीतको भावअनुसार किकी लेडिज पात्र हुन् । उनीसँग गायकले प्रेमका लागि प्रश्न गरेका छन् ‘किकी, डु यु लभ मी ? आर यु राइडिङ ?’
धेरैले ‘किकी’ टेलिभिजन प्रस्तोता केसिआ केके चान्ते भएको अनुमान गरेका छन् । केके ६ वर्षको उमेरदेखि नै ‘ट्यालेन्ट सो’हरूमा भाग लिँदै आएकी प्रतिभावान् कलाकार हुन् । ममीको साथीले भाग लिन हौस्याएर एउटा ट्यालेन्ट सोमा पुगेकी केकेले अहिलेसम्म धेरै र्‍याप र पप गीतमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनको मुख्य पेसा भने टेलिभिजन होस्ट नै हो । धेरै सेलेब्रिटीहरू उनको सुन्दरताका फ्यान छन् । यसअघि पनि उनको नाममा धेरै गीत गाइएकाले यो पनि उनैलाई सम्बोधन गरेर गाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनी गायक ड्राककी पूर्वप्रेमिका भएको हल्ला पनि हलिउड बजारमा चलेको छ । त्यसो हुँदा गीतमा सम्बोधन गरिएकी किकी उनै हुन सक्ने अनुमान धेरैले लगाएका छन् ।
‘किकी च्यालेन्ज’ डान्स उट्पट्याङलाग्दो हुन्छ । यो डान्समा गुडिरहेको गाडीबाट म्युजिकको तालमा झरेर गीतकै तालमा नाच्दै-नाच्दै फेरि गुडिरहेको गाडीमा चढ्ने गरिन्छ ।
कसरी भयो भाइरल ?
‘द सिगी सो’का प्रोड्युसर सिगीले डान्स गरेर इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेपछि यो निकै चर्चित बन्यो । तर, सिगीले पोस्ट गरेको भिडियोमा उनी चलिरहेको कारबाट झरेर डान्स गरिरहेका छैनन् । उनी एउटा ठूलो भवनको अगाडिको खुला स्थानमा उक्त गीतमा डान्सिङ मुभ गरिरहेका छन् । भाइरल भइरहेका किकी च्यालेन्ज भिडियोहरूमा भने धेरैले चलिरहेको कारबाट झरेर यो गीतमा डान्स गर्दै कारमा चढेको देखिन्छ । यसरी सुटिङ गरिएका भिडियोमा सबै प्रयोगकर्ता सफल भएका देखिन्नन् । कतिपय व्यक्ति नराम्रोसँग लडेर घाइते भएका तथा दुर्घटनामा परेका भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । यस्ता भिडियो पनि ‘किकी च्यालेन्ज फेल’ नाम दिएर युट्युबमा छ्याप्छ्याप्ती राखिएका छन् ।
यसको सुरुवात सिगीले गरे भनेर विश्वभरि हल्ला भएपछि उनले मिडियामा खण्डन गरेका छन् । ‘यसलाई पहिलोपटक मैले रमाइलोका लागि डान्स गरेर सेयर त गरको हुँ । तर, चलिरहेको कारको प्यासेन्जर सिटबाट हामफालेर डान्स गर्ने आइडिया भने मैले बनाएको होइन,’ सिगीले फ्रि प्रेस जर्नललाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भिडियोको टाइटलमा किकी च्यालेन्ज ह्यासट्याग दिएर आफ्ना करिब साढे एक करोडभन्दा बढी फ्यानलाई सिगी डान्स गर्न उत्प्रेरित गर्दै भिडियो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका थिए । उनले आफ्ना फ्यानहरूलाई गुडिरहेको गाडीबाट हामफालेर यस्तो भिडियो सुट नगर्न मिडियामार्फत सल्लाह दिएका छन् ।
पछ्याउनेमा सेलेब्रिटी पनि
रमाइलोका लागि गरिने यस्ता च्यालेन्ज प्रायः ठुल्ठूला सेलेब्रिटीले नै सुरु गरेको पाइन्छ । अनि त्यसलाई उनका फलोअरले यसलाई पछ्याउँछन् । ‘किकी च्यालेन्ज’ पनि सबैभन्दा पहिले त आफूले नै सुरु गरेको कुरा त सिगीले नै स्विकारिसकेका छन् । तर, गुडिरहेको गाडीबाट हामफालेर सबैभन्दा पहिले कसले यसको सुरुवात ग¥यो, त्यसमा चाहिँ कसैले पनि दाबी गरेको छैन । यद्यपि, धेरै सेलेब्रिटीले यसलाई पछ्याएका छन् ।
तीमध्येकी एक हुन्, इजिप्टकी सुन्दरी दिना सर्बानी । उनले कारबाट झरेर डान्स गरेको भिडियो किकी च्यालेन्ज ह्यासट्याग दिएर इन्स्टामा पोस्ट गरेकी छिन् । त्यस्तै, ट्युनिसियाकी हिरोइन डोर्रा जार्रोउक, बहराइनका गायक हाला अल टुर्क, फ्रान्सबाट साउदीकी चर्चित ब्लगर हाला, साउदीकी चर्चित मोडल रिमा अल सानिआ र इजिप्टका फुटबलर एस्साम अल हद्दारीले पनि यसमा कभर गरेका छन् । बलिउडका कलाकारहरू वरुण शर्मा र नुरा फतेसलगायत टिभी कलाकार र स्टारहरूले पनि यो च्यालेन्जमा भाग लिएका छन् ।
युएई पुलिसले किकी च्यालेन्ज सुटिङ गरेका कारण त्यहाँका चर्चित ब्लगर र मोडलहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, जोर्डनलगायत मुलुकमा किकी च्यालेन्ज भिडियो बनाएर इन्टरनेटमा पोस्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कसरी रोक्ने ?
भारतमा किकी च्यालेन्जमा सहभागी हुनेहरूको संख्या अत्यधिक बढेपछि भारतीय पुलिसले यसविरुद्ध सक्रियता बढाएको छ । मुम्बई पुलिसले पछिल्लो समय डिजिटल होर्डिङ बोर्ड र सामाजिक सञ्जालमा जनचेतनामूलक पोस्टर अभियान थालेको छ । त्यस्तै, युएई पुलिसले किकी च्यालेन्ज सुटिङ गरेपछि त्यहाँका केही चर्चित ब्लगर र मोडललाई गिरफ्तार गरेको छ । इजिप्टमा पनि प्रहरीले किकी च्यालेन्जको नक्कल नगर्न र ट्राफिक समस्यालाई सुल्झाउन यस्तै अभियान चलाइरहेको छ । केही देशका सरकारले यसमाथि प्रतिबन्ध र जेल सजायँसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरेका छन् । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, जोर्डनलगायत मुलुकमा किकी च्यालेन्ज भिडियो बनाएर इन्टरनेटमा पोस्ट गर्न प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता क्रियाकलाप गरेर अरूलाई पनि गलत गर्न प्रोत्साहन गरेमा कारबाही गर्ने बताएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तले भने, ‘कसैले सवारीसाधनभित्र मनोरञ्जनका लागि गीत बजाएर सुन्ने विषय ठूलो होइन । तर, सडक दुर्घटना हुने गरी यस्ता क्रियाकलाप गरेमा जुन दफा आकर्षित हुन्छ, त्यहीअनुसार कारबाही गर्छौं ।’
नेपालमा पनि अभ्यास हुँदै
इन्टरनेटको समयमा विश्वको जुनसुकै कुनामा जस्तोसुकै घटना घटे पनि क्षणभरमै व्यक्तिको हातमा आइपुग्छ । कुन विषयलाई कति महत्व दिने भन्ने मात्रै हो । ‘नेपालमा पनि यस्ता भाइरल र ट्रेन्डिङ भएका घटनालाई धेरैले पछ्याएको पाइन्छ,’ भन्छन् प्रविधिबारे ब्लगिङ गरिरहेका अनिल आकार । ‘किकी च्यालेन्जलाई लिएर भारतमा केही दुर्घटना भएको भए पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म खास असर गरेको पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, धेरै समय लाग्दैन, हाम्रोमा पनि सिको गर्ने चलन धेरै छ । यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’
मानिसहरूले धेरै स्ट्रेस भएपछि फ्रेस हुन इन्टरनेटको सहायता लिने गरेको र यस्ता गलत कुराको सिको गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्, मनोविद् डम्बरराज पन्त । ‘नेपालमा तनावमा बाँच्ने युवाको संख्या धेरै छ । उनीहरू धेरै समय इन्टरनेटमा बिताउने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले तनाव कम गर्ने बहानामा पनि यस्ता हर्कत गर्न सक्छन् ।’
पछिल्लो समय युट्युबमा भ्युअर बढाउनकै लागि पनि विदेशमा भएरगरिएका क्रियाकलापलाई सिको गर्ने चलन बढेको छ । अनियन्त्रित ढंगले खोलिएका युुट्युब च्यानललाई हिट गराउन र साथीभाइबीच रमाइलोका लागि पनि यसलाई नेपाली युवाले पछ्याउन सक्ने सम्भावना छ ।
#किकी च्यालेन्ज #जाेखिमपूर्ण #भाइरल डान्स
प्रियंका लगातार ट्रोलको सिकार
लोकसभा चुनाव माधुरी नलड्ने
क्यानभासमा बोलिरहेको पाटन